Telo, Roa, Iray…… Lasa! Mijoro ny endri-PIAINANA GV ary miasa! · Global Voices teny Malagasy
Telo, Roa, Iray…… Lasa! Mijoro ny endri-PIAINANA GV ary miasa!
Voadika ny 02 Septambra 2019 16:55 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2018)
Dia eto isika izao, andalam-pananterahana ny iray amin'ireo hevitra marobe tsara indrindra navoitra nandritra ny Fihaonambe farany nataon'ny Global Voices tany Kolombo, tao Sri Lanka, tamin'ny volana Desambra lasa teo. Volana vitsivitsy taorian'ny ketrika miadana, efa miasa izao ny GV LIFEstyle (endri-piainanaGV) !
Vao avy navoakanay ireo lahatsoratra roa voalohany tamin'ity rantsana “beta” amin'ny GV ity:
1. Tantarana pasipaoro: ny endrika tsy marin-toerana ananan'ny zon'olombelona amin'ny fahazoana mandehandeha . Avy amin'i Violeta Camarasa. Maro ireo olona nandray anjara tamina fomba samihafa tamin'ity tantara ity – efa fipoahana izany!
2. Torolalana ho an'ny GVer hankao Taipei, Taiwan. Nataon'i Ifan Lin. Anisany ampahany tamin'ny “Torolalana ho an'ny GVer ho…” izy ity, mifototra amin'ny endrika iombonana. Ampahafantaro anay raha toa ianao maniry ny handray anjara amin'ny famaliana an'ireo fanontaniana mikasika ny tanànanao / tanàna izay onenanao!
Hatreto dia tehirizinay ao amin'ny blaogin'ny vondrom-piarahamonina ilay rantsana vaovao, izay manome toerana betsaka mba hanandramana an'ireo zoro vaovao, ireo endrika, fomba fiasa, sy ny sisa. Afaka hitanao eo ambanin'ny maritsoratra GV LIFEstyles ireo tantara . Nanjary nilendalenda ve? Azafady tongava hanatevina anay! Afaka mandray anjara amin'ny fomba maro samihafa ianao amin'ny GV LIFEstyles: manoratra na mandika ireo tantara, mamoaka, mizara hevitra sy fitaovana, mifanakalo hevitra momba ireo endrika vaovao, manampy amin'ny fandrindrana…
Fa maninona no ataontsika ny GV LIFEstyles?
Marobe ireo hevitra ambadiky ny famoronana ny GV LIFEstyles. Indreto sasantsasany amin'izy ireo (tsy nandramanay akory ny nanafina ny korontana): manoratra tantara mivantambantana, miaraka aminà fijery ankapobe, mikasika ireo zavatra izay miantraika amin'ny fiainana andavanandro, izay teraka avy amin'ireo zavatra tena niainana manokana na niarahana, izay afaka manampy ireo mpamaky hiatrehana / handraisana fepetra manoloana an'ireo olana matetika saro-bahana sy mahakivy, izay mety hanampy hampifandray ireo olana erantany amin'ireo zavatra niainana manokana… Dia izay. Mino aho fa hanome hevitra anao io.
Hatramin'izao, nifanakalo hevitra mikasika ireo sehatra misy votoaty maro somary mifangaroharo izahay (ary dia mihalava isanandro ny lisitra): ireo Zavapady Erantany, ny Fivezivezena, Fahatakarana ireo Teknolojia, Fampiasàna tsara & manaraka fitsipika an'ireo Media Sosialy, ny “dona fanampiny” anatin'ny Fotoana digitaly, Tontolo iainana, Fikarakarana ny Biby, Tantara… Ireo fahafahana tsy voafaritra! Fanampin'izany, ny sasantsasany tamintsika dia tena nihetsi-po mikasika ny fifanakalozana hevitra sy ny fanandramana ireo endrika vaovao, na tanaty lahatsoratra na an-tsary.
Ahoana no fomba fiarahansika miasa?
Rehefa nifanakalo hevitra momba ny rantsana GV LIFEstyles izahay nandritra ny Fihaonambe dia nisy zavatra iray hafa nipoitra: nirianay ny hiaraka hiasa, anaty tarika ary hiankina amin'ny fanohanana sy ny hevitra avy amin'ireo mpanoratra hafa. Ao anatin'io fiheverana io, namorona toeram-piasana Google Group sy GV LIFEstyles teo amin'ny Slack izahay, izay efa toarana fifanakalozana hevitra sy famondronanay sahady an'ireo hevitra mikasika ireo lohahevitra vitsivitsy: ny fadimbolana atao toy ny fady erantany (Marie Bohner, Elise Lecamp, Violeta Camarasa ary i Weiping no niasa tamin'ireo lahatsoratra mikasika ny kanto mifandraika tamin'ny fadimbolana), ny fivezivezena (Eddie, Elise ary I-fan Lin no niasa mikasika ny torolàlana iray hanomezana hevitra mikasika ny tanànanareo), Fahatakarana ny teknolojia (i Ali Khalil no nanao an'ireo fikarohana mikasika ireo politika izay sady avy amin'ny governemanta no avy amin'ireo orinasa sahala amin'ny Google na ny Facebook momba ny ‘cryptocurency’ (vola elektronika))…
Hanomana an'ireo fivoriana tsy tapaka amin'ny tambajotra ihany koa izahay. Nanana fivoriana fanombohana izahay tamin'ny 2 Martsa ary amin'ity herinandro ity izahay dia hanana fivoriana roa fanarahamaso, ny 22 sy ny 26 Martsa. Ankasitrahana ny fahatongavanareo hanatevina anay!
9 ora izayAzia Atsimo
11 ora izayOseania